Global Voices teny Malagasy » Afa-manadio ny kolikoly any amin’ny orinasam-panjakana ao Shina ve ny fanomezana azy amin’ny tsy miankina? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Septambra 2015 6:50 GMT 1	 · Mpanoratra Jack Hu Nandika Andriamifidisoa Zo
Tsy mbola nisy hetsika fikendrena ireo ahiahiana ho manao kolikoly eo amin'ny mpitantana ambony avy amin'ny antoko komonista shinoa, governemanta, miaramila ary orinasa tantanin'ny fanjakana natao toy izao hatramin'ny niakaran'ny Filoha Shinoa Xi Jinping teo amin'ny fitondrana tamin'ny faramparan'ny taona 2012. Mbola mihalava hatrany ny lisitry ny “lalitra” (olon-tsotra) sy ny “tigra” (mpitantana ambony)  voafandrika, saingy maro ny manontany tena raha hampiova zavatra ny fanenjehana olona tsirairay, rehefa hita fa efa namboarina hiarahan'ny manampahefana ambony ao amin'ny governemanta sy ny kapitalista miasa akaiky ny rafitra.
Ho famahana ny olana fototry ny kolikoly, dia nahasahy niantso ny hividianan'olon-tsotra tsy miankina ireo orinasa tantanin'ny fanjakana i Liu Shengjun, mpahay toekarena malaza sady mpitari-kevitra eo amin'ny fampitam-baovao sosialy shinoa Weibo. Nantsoiny hoe  “kapitalisman'akamakama”, izy ireny satria tsy mahomby sady mikolokolo ampihimamba sy kolikoly fotsiny.
Namelabelatra  bebe kokoa ilay mpahay toekarena:
Notsongainy  ihany koa ny tenin'ny mpandraharaham-pamarotan-karena mifaka [trano sy tany] malaza iray sady mpitari-kevitra, Ren Zhiqiang, fa “tokony hofoanana tanteraka ny orinasam-panjakana”.
I Deng dia nolazaina  no manao fitondran'olon-tokana ary manjakazaka eo amin'ny fomba fitantanana. Nahazo tombontsoa tsy ara-dalàna tsy nandoavan-ketra nanararaotra ny fahalalana olona ny rahalahiny sy ny zananilahy. Niteraka fatiantoka goavana ny fanapahan-kevitr'i Deng's hampiasa vola amin'ny fitrandrahana tany ivelany.
Raha iverenana tamin'ny volana Marsa, dia nofotopotorina amin'ny fanitsakitsahana ny fifampifehezan'ny antoko  ny filoha teo alohan'ny fanamboarana fiara lehibe indrindra ao Shina FAW, Xu Jianyi, araka ny nolazain'ny CCDI. Iray volana taty aoriana, dia nomelohina higadra mandrapahafatiny noho ny fanekena handray kolikoly ny filoha faratampony amin'ny fitantanana teo aloha Shi Tao.
Tamin'ny herintaona i Beijing no namoaka ny politikan'ny “fangaron-tompony” , izay mandrisika ny renivolan'ny tsy miankina ampiasaina sy hitazona petra-bolan'ny vitsy an'isa ao amin'ny orinasam-panjakana. Fa tsy dianisy fiantraikany loatra ilay politika satria ny fitazonana petrabola vitsy an'isa ao amin'ny orinasa dia manala azy ireo tsy ho afaka mandray fanapahan-kevitra eo amin'ny tetika ara-pandraharahana sy fitantanana, mahatonga ny ny mpampiasa vola hisalasala amin'ny mety ho tamberim-bolany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/09/13/74302/
 lisitry ny “lalitra” (olon-tsotra) sy ny “tigra” (mpitantana ambony): http://www.abc.net.au/news/2015-01-14/chinas-tigers-downfall-timeline/6016714
 Nantsoiny hoe: http://weibo.com/1889213710/CyddM9sC1?from=page_1005051889213710_profile&wvr=6&mod=weibotime
 nofotopotorina amin'ny fanitsakitsahana ny fifampifehezan'ny antoko: http://www.autonews.com/article/20150315/GLOBAL03/150319905/faw-chairman-xu-jianyi-faces-government-corruption-probe
 no namoaka ny politikan'ny “fangaron-tompony”: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/07928638-0c24-11e4-a096-00144feabdc0.html